Tiknooloojiyada Geospatial, Doorka iyo muhiimadda ku jirta habka IT-ga ee Waaxda Gaadiidka. - Gofumed
Tiknooloojiyada Geospatial, Doorka iyo muhiimadda ku jirta habka IT-ga ee Waaxda Gaadiidka.
Sebtember, 2017 Geospatial - GIS, GPS / Qalabka, tabo cusub
Tiknooloojiyada Geospatial. Lagu soo koobay sida dhammaan tiknoolijiyada loo isticmaalo si loo helo, loo maamulo, loo falanqeeyo, loo arko loona faafiyo labadaba macluumaadka iyo macluumaadka loo gudbiyo goobta sheyga, ayaa ka gudbay rikoodhkii hore ee sadexda sadexaad ee asaasiga ah ee GIS, GPS iyo Sensing Remote (RS oo Ingiriisi ah) kaas oo ku jira kuwan soo saara teknolojiyada soo baxaya ee isticmaala qaybta juqraafiyeed (tusaale, geofencing) taas oo ay ku jiraan, sababo kale, "teknooloojiyada ayaa soo afjaraya isku dhafka iyo xaddigooduna waa sii kordhaya"
Dhab ahaantii, ka dib markii ay ka muuqato Evolution of GIS, shuruudaha la xiriira isaga iyo xirfadlayaasha loo baahan yahay aaggan; waxay u muuqataa in ay tahay inaan hadda u dhaqaaqno "barta fal" oo ka hadal arrimaha dhab ah kuwaas oo fikradahan la adeegsanayo.
Waxaan dib u soo noqdaa, ka dibna, inaan akhriyo maqaalkan Bruce Aquila si loo soo saaro ereyada muhiimka ah oo ay tahay in maqaalku bilaabo maanta. Waxaan soo saari karaa saddex (3) waxaanan bilaabi karaa:
Evolution. WebGIS (GIS oo ka dhigaysa isticmaalka teknooloojiyada Webka) ayaa soo bandhigay qaabka isbedelka GIS ee kaas oo qaybaha ee nidaamka (Hardware, Software, macluumaadka iyo kuwa isticmaala) uma baahna inay noqdaan dhammaan jir ahaan isla goobta laakiin, iyada oo loo marayo horumarinta cusub, macluumaadka loo soo bandhigo isticmaalaha ayaa si sahlan, degdeg ah oo aan si fudud loo heli karin iyada oo la isticmaalayo qawaaniinta lagama maarmaanka ah iyo heerarka u oggolaanaya isku xirka iyo bedelidda qaybaha. Habkani "u adeegaya" macluumaadka waa waxa u oggolaanaya Internet-ku-gudubka internetka oo loo yaqaano sida Adeegyada Webka.
Haddii aanad illoobin in WebGIS lagu fulin karo siyaalo dhowr ah: daruur, maxaliga ah ama isku dhafan labadaba sida ku xusan kiiska, taas oo ah, hadda, muhiim u ah shaqadayada.
Helitaanka. Ka mid ahaanshaha sida Wasaaradda Gaadiidka ee hay'ad dowladeed, oo ah meesha goobta waa sheyga ugu muhiimsan ee shaqada, natiijada muhiim ah abuuraan natiijooyin u oggolaanaya go'aan ku filan oo lagu fulinayo hawlaha iyo mashaariicda la xiriira hawlaha, waddooyinka waddooyinka, ammaanka, injineernimada iyo ilaalinta, iyo meelaha kale.
Waxaannu ku tirinnaa in technology geospatial isticmaalo waa muhiim in nidaamka this. Laakiin, tan iyo markii labada abuurka ah ee Adeegyada Web iyo hirgelinta WebGIS dhamaan qaababkeeda kala Nooga keeno isticmaalka IT ah ( "Techies" ee u dhexeeya) waa ansax ah si aad naftaada weydii waxa qeybinta waaxda (DOT English) dheeraad ah oo si fiican ku haboon technology geospatial si ay u caawiyaan in go'aan qaadashada in geeddi-socodka lagu guulaystay oo hufan?
Aquila, in uu maqaal Su'aashani waxay soo baxaysaa sababtoo ah, sida aynu u fahmi doonno waqti dambe, waxay dhab ahaantii tilmaamaysaa a isbedel iyo sababaha uu u keeno.
"Caadiyan, farsamadani waxay ku nooshahay qaybta qorshaynta", ayuu raaciyay, isagoo intaa ku daray in arrintani ay sababtay, sababaha kale, doorka ay ku leedahay qalabka falanqaynta ee go'aan qaadashada iyo shaqadiisa ugu weyn ee daboolaysa baahiyaha badan ee khariidada .
Si kastaba ha ahaatee, Aquila ayaa sii socota, iyada oo tiknoolijiyada xayawaanka ay soo baxayaan, waxay bilaabeen in ay si badan u galaan DBMS. Sidaas darteed DBMS sida Oracle, SQL Server, DB2, iyo PostgreSQL waxay u adeegaan sidii ay u taageeri lahaayeen dukaamada xogta qaran, waxay sii dheereynayaan jahwareerka in ay ku daraan fikradaha xuduudaha ee DOT IT architecture.
"Intaa waxaa dheer, dhibcaha isticmaasho wax badan oo adeegyada web in ay uga faa'iidaysato in xogta lagu kaydiyaa database qiimaha" sii qoraaga, ka dibna ku doodaya in "ka fiirsaneysa aalada internetka si ku baahday maanta, waaxda IT waa gacanta ku adag in ka badan noocyada iyo isticmaalka adeegyada web dhaqan kala duwan "sidaas waxaa soo socota in tani waxay noqon lahayd arrin kale oo jeclaan lahaa inuu ku" wareeg "xagga qeybinta DOT waxaa.
Aynu xoojinno hal dhibic oo falanqayntiisa, suurtagalnimada isbeddelka mashaariicda loo adeegsado maaddaama ay jirto isbeddel muuqda oo ah "ku-tiirsanaanta farsamooyinka meelaha maabka"; Sababtoo ah kordhinta adeegyada webka oo yareeya miisaaniyadda, diiradda saaraya isticmaalka software-ka ee "hawlaha falanqeynta culeyska".
Kaalinta barnaamijka barafka ayaa sidoo kale saameyn ku leh isdhexgalka qaab dhismeedka IT. Tani waa sababta ay DOTs ay bilaabeen inay tixgeliyaan dhismaha codsiyada daruuriga ah. Tixgelinta halkan sida arrin muhiim u ah maamulka seguridad taas oo caddaynaysa waaxda IT-ga. Xaaladdan oo kale, wuxuu tilmaamayaa, falanqayn hore ayaa looga baahan yahay inuu go'aan ka gaaro meesha si ay u martigeliyaan codsiyada la soo saaray: gudaha ama iyada oo la adeegsanayo "adeegga xisaabinta ee macaamilka ganacsiga". Aan ku darno in mawduucani uu ahaa sababta casharro oo ay sameeyeen Aquila iyo khabiiro kale waxaan u soo jeedinaynaa inay aqbalaan kuwa raba inay ballaadhiyaan marxaladan.
Maxay Aquila soo jeedisay gaar ahaan "barakaca" ee dhammaan oo ku saabsan tiknooloojiyada casriga ah ee aagga IT-ga ee DOT sababaha kor ku xusan.
Ogow in isbeddelkan uu dhalin doono caabuqyo iyo halgano si looga fogaado lumitaanka xakamaynta xarunta dhexe ee caadiga ah; isbeddelka, haddii ay dhacdo, waxay u baahan doontaa muddada ay aqbalayaan hay'adaha "saameynaya". Sidaa darteed, wuxuu soo gabagabeynayaa in "wax walba waa in loo sameeyaa faa'iidada wanaagsan ee guud".
Waxaan ku dhameeyaa faalladan, hab furan, weydiinaya su'aalahan soo socda:
Miyaan ku raacaynaa qoraaga?
Ma ogtahay waxa ururka ururku leeyahay ee DOT waa aaggeenna?
Maxaan ka fekereynaa?
Post Previous«Previous Live - Hurricane Irma - Bulshadu waxay u egtahay in ay la falgaleyso geospatial
Post Next Dhab ahaantii miyaanu ku dhajineynaa nidaam "hal-abuur" marka ay timaado 3D Meelaha?Next »